साहित्य Archives - NEPALI TV AUSTRALIA
धाका तपुलि,अन्तरराष्ट्रीय टोपी दिवस र पुनर्जीवित ढाका टोपी मोह
सबिन कार्की, सिड्नी नेवारी भाषामा कपडाको टोपी बुन्न प्रयोग गरिने एउटा विशेष प्रकारको धागोलाई धाका भनिन्छ । धाकाबाट बुनिएको टोपीलाई धाका तपुलि भनिन्छ र डोटेली भाषा(खस भाषा)मा घरमै पराम्परागत तरिकाले बनाइएको धागो लाई धाका भनिन्छ। धाकाबाट बनेकोहुनाले सुरुवातमा धाका...
जिल्लास्तरीय दोस्रो धिमे बाजा प्रतियोगिता २०७५ को उपाधि सिरुटारस्थित लूनिभाः धिमे खलःले जितेको छ । प्रतियोगितामा सहभागी ११ समूहलाई पछाडि पारेर खलःले नगद १५ हजारको साथमा जिल्लाकै धिमे बाजा बजाउने उत्कृष्ट टोलीको उपाधि जितेको हो । सरस्वती कला केन्द्रले आयोजना...
सन्नाटा छ सवैतिर……
सन्नाटा छ सवैतिर खै, कस्तो यो परिवेश हो ? लाग्छ घरी घरी मलाई ,यो मुर्दाहरूको देश हो ! बोल्ने वेला बोल्दैन कोही , मुख सिएर बस्छ बोल्यो भने मालिकलाई चिप्लो मात्रै घस्छ हस हजुर हुन्छ मालिक एति मात्रै सुनिन्छ थाहा छैन तिनको वोली खै केले पो थुनिन्छ ? सन्नाटा छ ...
मेल्बर्नमा ‘विनर नाईट २ हुदै’
एक जुट भए रकडेलका व्यवसायी
राजदूत दाहालले बुझाए ओहोदाको प्रमाणपत्र
नवनियुक्त राजदुत दाहालले समाले कार्यभार